1 Tantara 4 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tantara 4:1-43
4 Ary ny zanakalahin’i Joda dia i Pereza,+ Hezrona,+ Karmy,+ Hora,+ ary Sobala.+ 2 Ary i Reaia+ zanak’i Sobala niteraka an’i Jahata, ary i Jahata niteraka an’i Ahomay sy Lahada. Avy tamin’ireo no niavian’ny fianakavian’ny Zoraita.+ 3 Ary ireto avy ny zanakalahin’ny rain’i Etama:+ Jezirela,+ Jisma, Jidbasy,—Hazelelpony no anaran’ny anabavin’izy ireo—, 4 Penoela rain’i Gedora,+ ary Ezera rain’i Hosa. Ireo no zanak’i Hora,+ izay lahimatoan’i Efrata sady rain’i Betlehema.+ 5 Ary i Asora+ rain’i Tekoa+ nanana vady roa: Hela sy Nara. 6 Ireto avy no naterak’i Nara taminy: Ahozama, Hefera, Temeny, ary Hahastary. Ireo no zanak’i Nara. 7 Ary ny zanakalahin’i Hela dia i Zareta sy Jizara ary Etnana. 8 Ary i Koza niteraka an’i Anoba sy Zobeba ary ireo fianakavian’i Aharela zanak’i Haroma. 9 Ary i Jabeza+ nahazo voninahitra kokoa+ noho ny rahalahiny. Ary ny reniny no nanome azy ny anarana hoe Jabeza, fa hoy izy: “Narary aho niteraka azy.”+ 10 Ary niantso an’ilay Andriamanitry+ ny Israely i Jabeza, ka nanao hoe: “Raha hitahy+ ahy tokoa ianao, ka hanitatra ny faritaniko,+ sady homba ahy ny tananao,+ ary hiaro ahy tsy ho voan’ny loza ianao,+ ...” Koa nomen’Andriamanitra azy izay nangatahiny.+ 11 Ary i Keloba rahalahin’i Soha niteraka an’i Mehira, rain’i Estona. 12 Ary i Estona niteraka an’i Beti-rafa sy Pasea ary Tehina rain’i Ira-nahasa. Ireo no olona tao Reka. 13 Ary ny zanakalahin’i Kenaza+ dia i Otniela+ sy Seraia. Ary ny zanak’i Otniela dia i Hatata. 14 Ary i Meonotahy niteraka an’i Ofra. Ary i Seraia niteraka an’i Joaba rain’i Ge-harasima. Fa lasa mpanao asa tanana+ izy ireo. 15 Ary ny zanakalahin’i Kaleba+ zanak’i Jefone,+ dia i Iro sy Elaha ary Nama. Ary ny zanak’i Elaha dia i Kenaza. 16 Ary ny zanakalahin’i Jehalalila dia i Zifa sy Zifaha sy Tiria ary Asarela. 17 Ary ny zanakalahin’i Ezra dia i Jatera sy Mareda sy Efera ary Jalona. Ary niteraka an’i Miriama sy Samay ary Jisba rain’i Estemoa+ ravehivavy. 18 Ary ilay vadiny jiosy dia niteraka an’i Jareda rain’i Gedora, sy Hebera rain’i Soko, ary Jakotiela rain’i Zanoa. Ireo no zanakalahin’i Bitia zanakavavin’i Farao. Nalain’i Mareda ho vadiny i Bitia. 19 Ary ny vadin’i Hodia dia anabavin’i Nahama, ka ireto avy ny zanakalahiny: Ny rain’i Keila+ Garmita sy Estemoa Makatita. 20 Ary ny zanakalahin’i Simona dia i Amnona sy Rina sy Ben-hanana ary Tilona. Ary ny zanakalahin’i Jisy dia i Zoheta sy Ben-zoheta. 21 Ary ny zanakalahin’i Sela+ zanak’i Joda, dia i Era rain’i Leka sy Lada rain’i Maresa, sy ireo fianakavian’ny mpanenona lamba tena tsara+ avy amin’ny ankohonan’i Asbea, 22 sy Jokima sy ireo olona tao Kozeba, ary koa Joasy sy Sarafa izay samy naka vady vehivavy moabita,+ ary Jasobi-lehema. Lovantsofina+ no nahafantarana an’izany. 23 Mpanefy tanimanga+ izy ireo sady nonina tao Netaima sy Gadera. Niasa ho an’ny mpanjaka no nipetrahany tao.+ 24 Ary ny zanakalahin’i Simeona dia i Nemoela+ sy Jamina+ sy Jariba sy Zera ary Saoly.+ 25 Ary i Saoly niteraka an’i Saloma, ary i Saloma niteraka an’i Mibsama, ary i Mibsama niteraka an’i Misma. 26 Ary i Misma niteraka an’i Hamoela, ary i Hamoela niteraka an’i Zakora, ary i Zakora niteraka an’i Simey. 27 Ary i Simey nanana zanakalahy enina ambin’ny folo sy vavy enina, fa ny rahalahiny kosa tsy nanan-janaka maro. Ary tsy nisy tamin’ny fianakavian’izy ireo nanan-janaka maro tahaka ny taranak’i Joda.+ 28 Ary izy ireo nonina tao Beri-sheba+ sy Molada+ sy Hazara-soala+ 29 sy Bilaha+ sy Azema+ sy Tolada+ 30 sy Betoela+ sy Horma+ sy Ziklaga+ 31 sy Beti-markabota sy Hazara-sosima+ sy Beti-biry ary Saraima.+ Ireo no tanànany mandra-panjakan’i Davida. 32 Ary i Etama sy Aina sy Rimona sy Tokena ary Asana+ no tanàna keliny, dia tanàna dimy. 33 Ary hatrany Bala+ ny tanàna keliny rehetra nanodidina an’ireo tanàna ireo. Ireo no toeram-ponenany sy ny tetirazany manokana. 34 Mesobaba sy Jamleka sy Josa zanak’i Amazia, 35 sy Joela sy Jeho zanak’i Josibia, zanak’i Seraia, zanak’i Asiela, 36 ary koa Elioenay, Jakoba, Jesohaia, Asaia, Adiela, Jesimiela, Benaia, 37 ary Ziza zanak’i Sify, zanak’i Alona, zanak’i Jedaia, zanak’i Simry, zanak’i Semaia: 38 Ireo voatonona anarana ireo no mpiadidy teo amin’ny fianakaviany.+ Ary nihamaro ny taranaky ny razambeny. 39 Ary nankany amin’ny fidirana ho ao Gedora hatrany atsinanan’ny lohasaha izy ireo, mba hitady tanimbilona ho an’ny ondry aman’osiny. 40 Dia nahita tanimbilona lonaka tsara+ izy ireo, ary nalalaka be ilay tany sady nandry feizay.+ Fa ny taranak’i Hama+ no nonina tao taloha. 41 Tamin’ny andron’i Hezekia+ mpanjakan’ny Joda no nankao ireo voasoratra anarana ireo, ka namely+ ny tranolain’ny Hamita sy ny Meonita hitany tao. Ary naringany+ ireny ka tsy hita intsony mandraka androany. Dia nonina tao izy ireo ka nisolo toerana an’ireny, satria nisy tanimbilona+ ho an’ny ondry aman’osiny tao. 42 Ary tamin’izy ireo dia nisy dimanjato lahy tamin’ny taranak’i Simeona nankany amin’ny Tendrombohitra Seira.+ Ary i Pelatia sy Nearia sy Refaia ary Oziela, izay samy zanak’i Jisy, no nitarika azy ireo. 43 Namely ny sisa afa-nandositra tamin’ny Amalekita+ izy ireo, ka mbola monina ao mandraka androany.